यी हुन् अमेरिकी नागरिकताका लागि थपिएका २८ सहितका १२८ प्रश्न, आवेदकले ध्यान दिनुपर्ने ३ कुरा
आगामी डिसेम्बर १ देखि अमेरिकी नागरिकताको आवेदन दिनेहरुका सन्दर्भमा अमेरिकाले नागरिकताका लागि लिइने परीक्षाका प्रश्नहरु थप गरेको छ । कैयन प्रश्नहरु किनका रुपमा सोधिएका छन् । अमेरिकी सिनेटरहरुको तुलनामा प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल किन छोटो हुन्छ ? किन स्वतन्त्रताको घोषणापत्र महत्वपूर्ण छ ? किन हरेक राज्यमा २ वटा सिनेटरको संख्या छ ? जस्ता कैयन प्रश्नहरु थपिएका छन् ।